गायन क्षेत्रका कलाकारको तिहार योजना : कोही जन्मघरतिर, कोही देउसीभैलोमा
काठमाडौं - नेपालीहरूको महान् चाड तिहार नजिकिँदै छ । नेपालीहरूलाई यतिबेला तिहारको रौनकले छाएको छ । घरहरू सिंगारिएका छन् । घर-घरमा बालिएको झिलिमिली बत्तीले तिहारलाई उल्लासमय बनाउँछ ।
दिदीभाइ तथा दाजुबहिनीबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने चाडको रूपमा लिइने तिहार गीतसंगीत क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरूलाई पनि राम्रैसँग लागेको छ ।
गीतसंगीतमा लागेका कलाकारहरूको तिहार योजना के छ ? कसरी मनाउँदै छन् ?
लोकगायक शिरीष देवकोटालाई धेरैले रोइला मास्टर भन्छन् । उनका अधिकांश रोइला हिट छन् । शिरीषलाई तिहार मनपर्ने चाड हो ।
पाल्पाका शिरीष धेरैवर्षपछि आफू जन्मेहुर्केको ठाउँ पुगेका छन् । गाउँको मन्दिरमा अखण्ड हरिकिर्तन हुने भएकाले उनी शनिवार त्यसतर्फ गए । अनि आफूले खेलेको, पढेको ठाउँ डुले ।
'बुटवलमा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको भैलो कार्यक्रम छ । त्यसमा उपस्थिति जनाउँछु,' तिहार योजनाबारे उनी भन्छन्, 'त्यसपछि घर गएर सामूहिक टिका लगाउने योजना छ ।'
शिरीष पैसा हारजित हुने गरी तास कहिल्यै खेल्दैनन् । भन्छन्, 'तिहारको दिन दाजुभाइ, मामाहरूसँग बसेर तास खेलिन्छ । हारजितका लागि नभइ विशुद्ध मनोरञ्जनका लागि तास खेल्छौं ।'
पछिल्लो समय निकै व्यस्त र चर्चित गायिका हुन् सम्झना भण्डारी । वैदेशिक रोजगारीको कथा बोकेको 'कपलु कोरेर' गीत अहिले गुञ्जिरहेको छ ।
गायिका सम्झना भण्डारी तिहारमा काठमाडौंमै हुन्छिन् । जन्मघर लमजुङ नजाले उनले बताइन् ।
'तिहारमा काठमाडौं नै हुन्छु । घरतिर जान्नँ,' तिहार योजनाबारे उनी भन्छिन्, 'तिहारअघिका कार्यक्रमहरू सकेर काठमाडौं फर्किए । तिहारका बीचमा हुने कार्यक्रममा कतै जादिनँ ।'
लोकपप गायक सुनिल गिरी 'को होला त्यो' मार्फत स्रोतादर्शकमा चिनिएका छन् । उनले गाएका अधिकांश गीत हिट छन् । पछिल्लो समय बजारमा उनको 'यात्री' आएको थियो । जसले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि केही हदसम्म सहयोग पुर्‍याउने छ ।
यसवर्षको तिहार गिरीले पोखरामा मनाउनेछन् । तिहार योजनाबारे उनी भन्छन्- पोखरामा बहिनी छिन् । त्यसैले यसवर्ष टिका पोखरातिरै लगाउने कुरा छ ।
तिहारअघिदेखि तिहारपछिसम्मै उनी कार्यक्रममा व्यस्त हुन्छन् । भन्छन्- देउसीभैलो खेल्दिनँ ।
तास भने उनी कहिल्यै पनि खेल्दैनन् ।
सम्झना लामिछाने मगर,लोकगायिका
'फूल फुलेर पहेँलै भयो'बाट चर्चामा आएकी गायिका सम्झना लामिछाने मगरलाई यसवर्ष तिहारले खासै छोएको छैन ।
हजुरबुबाको देहावसान भएका कारण उनले तिहार मनाउन पाउने भइनन् ।
भन्छिन्, 'हामी दु:खमा छौं । टिका लाउन भएन । सम्पूर्ण नेपालीलाई तिहारको शुभकामना दिँदै सबैको भलो चिताएर बस्छु अब ।'
'चौतारीको बर'बाट चर्चामा आएका गायक हुन् विक्रम परियार ।
परियार यतिबेला लोकदोहोरी प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वयन समितिले आयोजना गरेको भैलो खेलिरहेका छन् । उनी लोकदोहोरी प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वयन अनामनगर इकाइका सहसचिव पनि हुन् ।
तिहार योजनाबारे उनी भन्छन्, 'तिहार काठमाडौंमा मनाउँछु । घर जाँदिनँ होला । तिहारलगत्तै दुई वटा कार्यक्रमहरू छन् । त्यसमै सहभागी हुन्छु ।'
शर्मिला गुरुङ, लोकगायिका
३५ सयभन्दा बढी गीत गाइसकेकी शर्मिला गुरुङलाई तिहारको रौनकताले छोइसकेको छ । रानीघाटैमा, बल्लै भो भेट, राम्दी पुल, मेरो माया छ भने राधालगायत हिट गीत दिएकी शर्मिलाले यस वर्षको तिहार काठमाडौंमै मनाउँदैछिन् ।
तिहार योजनाबारे उनी भन्छिन्, 'तिहार काठमाडौंमा नै मनाउँछु । भाइ अस्ट्रेलिया छ ।'
तरपनि उनले तीन-चार जनालाई टिका लगाउनेछिन् ।
आफू राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने देउसी भैलोमा सहभागी हुने उनले बताइन् ।